म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट भनेको के हो?
म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट (778571-57-6) आज बजारमा म्याग्नेशियम गोलीको सबैभन्दा शोषक रूपको रूपमा खडा छ। म्याग्नेशियम एक साधारण खनिज हो जुन बिभिन्न खाद्य पदार्थहरूमा उपस्थित हुन सक्छ र मानव स्वास्थ्यको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकि यो तपाईंको शरीर प्रणालीमा 600०० भन्दा बढी सेलुलर प्रतिक्रियाहरूमा प्रयोग भएको छ।
म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट म्याग्टेन नामको पेटन्ट गरिएको छ र एक मात्र औषधि हो जुन दिमागमा म्याग्नीशियमको स्तर सुधार गर्न प्रभावकारी साबित भएको छ। तपाईंको शरीरमा प्रत्येक अंग वा सेललाई यसको कार्यहरू ठीकसँग गर्नको लागि म्याग्नीशियमको आवश्यक पर्दछ। यस खनिजले हड्डीको स्वास्थ्य, मांसपेशी, मुटु र सही मस्तिष्कको कार्य गर्न योगदान पुर्‍याउँछ।
अर्कोतर्फ, म्याग्नीशियमले निद्रा समस्याहरूको उपचारमा पनि मद्दत गर्दछ। आज बजारमा म्याग्नेशियम अक्साइड, म्याग्नेशियम साइट्रेट, र म्याग्नीशियम क्लोराइड सहित म्याग्नेशियम पूरकहरू धेरै प्रकारका छन्। यी फारामहरू सबै शरीरमा खनिज स्तर सुधार गर्न र सेल र अंग गतिविधिहरूलाई बढावा दिन मद्दतको लागि प्रयोग गरिन्छ।
राम्रो समाचार छ म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट पाउडर दुबै अनलाइन र तपाईको वरपरको भौतिक स्टोरहरूमा सजिलैसँग उपलब्ध छ। यद्यपि यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले औषधिको नक्कल मेडिकल प्रोफेशनलबाट राम्रो नतिजाहरूको लागि पाउनुभयो।
जति धेरै म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट तपाईंको शरीर प्रणालीमा लाभदायक छ, यसले गम्भीर साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ जब दुरुपयोग वा प्रयोगको लागि। जस्तो कि कुनै अन्य कुनै नोट्रोपिक लिँदा, तपाईको डाक्टरलाई सम्पूर्ण खुराक प्रक्रियामा समावेश गर्नाले तपाईंलाई गुणस्तर र प्रभावशाली परिणामहरूको आश्वासन दिन्छ।
कसरी गर्छ म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट काम?
मुख्य रूपमा, म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट कार्य भनेको तपाईंको शरीर प्रणालीमा म्याग्नीशियमको स्तर बढाउनु हो र तपाईंको समग्र कोशिका र अ organs्गहरूको कार्य सुधार गर्नेमा मद्दत गर्दछ। माथि उल्लेख गरिए अनुसार, म्याग्नेशियमले तपाईंको शरीरको कोशिकाको उचित कामका लागि सहयोग पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
म्याग्नेशियम खनिज विभिन्न दैनिक दिनको खानामा उपलब्ध छ जुन तपाईं लगभग दैनिक लिनुहुन्छ। यद्यपि कहिलेकाँही खनिजको स्तर तल जान सक्छ र तपाईंलाई विभिन्न स्वास्थ्य अवस्थामा उजागर गर्दछ। उदाहरण को लागी, कम म्याग्नीशियमको स्तरले मुड समस्या, डिप्रेसन, चिन्ता, मुटुको धड्कन, टाउको दुख्ने, र माइग्रेन निम्त्याउन सक्छ। एथलीटहरू पनि मांसपेशी क्रम्प र ट्वीचबाट ग्रस्त हुन्छन् जब उनीहरूको शरीर प्रणालीमा पर्याप्त म्याग्नीशियमको अभाव छ।
तपाईंको खानामा उपलब्ध स्वस्थ मैग्नीशियमको शीर्षमा, यदि खनिजले तपाईंको कोषहरू र अंगहरूको उचित क्रियाकलापको लागि पर्याप्त छैन भने, त्यसपछि तपाईंको डाक्टरले म्याग्नीशियम एल-थ्रोनेट निर्धारित गर्न सक्दछ। मानव शरीर फरक छन्, र यसैले, सबैले उस्तै समस्याहरू अनुभव गर्ने छैनन् जब तिनीहरू म्याग्नीशियमको कमीबाट ग्रस्त छन्। यद्यपि, म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट एक शक्तिशाली म्याग्नेशियम बूस्टिंग पूरक साबित भएको छ। तपाईको म्याग्नीशियमको अभावको स्तरमा निर्भर गर्दै, म्याग्नीशियम एल-थ्रोनोटेटले सही प्रयोग गर्ने बखत महत्त्वपूर्ण लाभहरू प्रदान गर्दछ।
एकचोटि तपाईंले आफ्नो म्याग्नेशियम एल-थ्रोनोटेट खुराक लिनुभयो भने, औषधि तपाईंको शरीर प्रणालीमा छिटो हुन्छ र तुरुन्तै काम सुरु गर्दछ। तपाईंको शरीरमा पर्याप्त म्याग्नेशियमको परिणाममा सुधार भयो संज्ञानात्मक समारोह र मेमोरी, शरीर को मांसपेशिहरु र तंत्रिका को उचित कार्य को बृद्धि गर्न को साथसाथै शरीरका अन्य भागहरु लाई पर्याप्त कामका लागि बढावा। तपाईको पेटमा, म्याग्नेशियम खनिजले पेटको एसिडहरू बेवास्ता गर्न र आन्द्रा मार्फत मलको आवागमनमा ठूलो भूमिका खेल्दछ।
भिसापावर म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट कच्चा मालको एक सीधा निर्माणकर्ता हो,
मासिक उत्पादन क्षमता ,3,000,००० केजीसम्म।
Is म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट निद्राको लागि राम्रो छ?
हो, म्याग्नेशियम एल-थ्रोनोटेट निन्द्राको लागि राम्रो। धेरै व्यक्तिहरूलाई समस्या हुन्छ जब यो गुणात्मक निद्रा पाउने कुरामा आउँदछ, र अनिद्रा चक्र तोड्न धेरै गाह्रो हुन सक्छ। तपाईं आफ्नो सुत्ने तालिका परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ वा क्याफिन सेवन घटाउन सक्नुहुन्छ तर इच्छित परिणामहरू प्राप्त गर्न असफल हुनुहुनेछ। यद्यपि म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट जस्तो पूरक सेवनले तपाईंलाई गुणस्तरीय निन्द्रामा मद्दत गर्दछ।
म्याग्नीशियम जस्तो खनिजको तपाईंको शरीर प्रणालीमा बिभिन्न प्रभावहरू हुन्छन् जसले निद्रालाई बढावा दिन्छ। तसर्थ, म्याग्नेशियमको अभाव अनिद्रामा परिणामस्वरूप स्वास्थ्य स्थिति हुन सक्छ। यसैले म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट, शरीर र सेलुलर प्रकार्यहरू सुधार गर्दछ जुन अन्ततः तपाईंलाई निन्द्रामा जान मद्दत गर्दछ। निद्रा मैग्नीशियमको पदोन्नतिमा तपाईंको शरीरमा निम्न भूमिकाहरू खेल्दछ;
(1)। आराम गर्न तपाईको शरीर र मस्तिष्कलाई मद्दत गर्नुहोस्
तपाईं गुणस्तरीय निद्रा प्राप्त गर्न को लागी, तपाईंको दिमाग र शरीर आराम गर्नुपर्छ। तपाईंको शरीर प्रणालीमा पर्याप्त म्याग्नीशियम स्तरले प्यारासिम्पेथेटिक स्नायु प्रणाली सक्रिय गरेर तपाईंको दिमाग र शरीरलाई आराम गर्न मद्दत गर्दछ, जुन तपाईंको शरीर प्रणालीलाई शान्त र आराम दिन जिम्मेदार छ। म्याग्नेशियमले न्यूरो ट्रान्समिटरहरूलाई नियन्त्रण गर्दछ, जुन तपाईंको मस्तिष्क र शरीरभरि स sending्केतहरू पठाउन जिम्मेवार छन्। अर्कोतर्फ, यसले हर्मोन मेलाटोनिन पनि नियमन गर्दछ जुन निद्रा-जगाउने चक्रहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्न जिम्मेवार छ।
म्याग्नेशियम गामा-एमिनोब्यूटेरिक एसिड (GABA) रिसेप्टर्समा बाँध्छ, जुन स्नायु गतिविधि शान्तिका लागि जिम्मेवार न्यूरोट्रान्समिटर हो। गाबा उही न्यूरोट्रान्समिटर हो जुन एम्बियन जस्तै निद्रा औषधीहरूको निर्माणमा प्रयोग हुन्छ। स्नायु प्रणाली चुप लागेर तपाईंको दिमाग र शरीर सुत्न तयार गर्दछ।
(२) म्याग्नीशियमको कमीले निद्रामा हस्तक्षेप गर्दछ
तपाईंको शरीर प्रणालीमा मात्र पर्याप्त म्याग्नीशियम खनिजको अभावले निद्रा समस्या वा अनिद्रा निम्त्याउँछ। त्यसकारण, म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट तपाईको शरीरमा खनिज स्तर सुधार गर्न महत्वपूर्ण छ तपाईलाई गुणस्तरीय निद्राको ग्यारेन्टी गर्न। चिकित्सा अध्ययनहरूले देखाए कि इष्टतम मैग्नीशियम स्तर सामान्य निन्द्राको लागि आवश्यक छ। जे होस्, दुबै उच्च र कम म्याग्नेशियम स्तरले निद्रा समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ, र त्यसैले यो लिनु अघि तपाईले मेडिकल जाँचको लागि जानु राम्रो हुन्छ। म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट खुराक.
बिभिन्न कारणहरू र स्वास्थ्य अवस्थाले म्याग्नीशियमको कमी हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, पाचन रोगहरु जसले तपाईको पाचन पथलाई असर गर्दछ यसले तपाईको शरीरलाई खनिज र भिटामिन उचित रूपमा अवशोषित गर्न कठिनाई पुर्‍याउन सक्छ जसले म्याग्नीशियमको कमीलाई निम्त्याउँछ। मधुमेह र इन्सुलिन प्रतिरोध पनि ठूलो मैग्नीशियमको घाटामा जोडिएको छ।
उमेर पनि एक कारक हो किनभने वयस्कहरूले कम वयस्कहरू भन्दा कम म्याग्नीशियमको साथ भोजन लिन्छन्। यसको मतलब बुढो वयस्कहरू निद्रा समस्या जस्तो मैग्नीशियमको कमीका लक्षणहरूबाट पीडित हुने उच्च जोखिममा छन्। भारी मदिरापान गर्नेहरूलाई पनि खनिजको कमी हुन सक्छ। पर्याप्त म्याग्नेशियमको मतलब तपाईको निद्रामा सुधार आउँनेछ, र त्यहा मैग्नीशियम एल-थ्रोनोटे काम आउँदछ।
()) निद्राको गुणवत्तालाई नियमित गर्दछ
म्याग्नेशियमले तपाईंलाई आराम र गहिरो निद्रा प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। स्नायु प्रणालीमा खनिजको प्रभावले तपाईंलाई गुणस्तरीय निद्राको लागि रातको लागि सजिलो बनाउँदछ। म्याग्नीशियमले न्यूरोन्ससँग बाध्यकारी हुँदा अणुहरूलाई रोक्छ, यसरी स्नायु प्रणाली शान्त हुन्छ, जसले गुणस्तरीय निद्रामा परिणाम दिन्छ। बिभिन्न अध्ययनहरूले देखाए कि निद्रा बढावा दिन कसरी म्याग्नीशियम अत्यावश्यक छ। हाल, अध्ययनले वयस्कहरू बीच निद्रा समस्याहरू समाधान गर्न म्याग्नीशियम प्रभावको पुष्टि गरेको छ।
मस्तिष्क rईस्टोरिंग impact मैग्नीशियम L-Threonate
मस्तिष्कमा म्याग्नीशियमको स्तर सुधार गर्ने क्षमताको आविष्कार भएपछि म्याग्नीशियम एल-थ्रोनेट पेटन्ट गरिएको थियो। यो औषधि चाँडै शरीर प्रणालीमा अवशोषित हुन्छ र दिमागमा मस्तिष्क बढ्ने लक्षणहरू जस्तै ध्यान घाटा डिसअर्डर (एडीएचडी) लाई उल्टाउन दिमागमा प्रवेश गर्दछ। यो एडीएचडी वर्षौंको बखत बिस्तारै विकास हुन्छ, र यसलाई प्रारम्भिक चरणहरूमा यसलाई याद गर्न गाह्रो हुन सक्छ, तर अवस्था संज्ञानात्मक गिरावटसँग सम्बन्धित छ।
ठूला वयस्कहरूले कम म्याग्नीशियमको साथ भोजन लिन्छन्, जसले म्याग्नीशियमको अभाव उनीहरूमा किन सामान्य छ भनेर वर्णन गर्दछ। पाचन समस्याहरू र मधुमेह जस्तो अन्य स्वास्थ्य अवस्थाहरू पनि छन् जुन शरीरमा म्याग्नेशियमको स्तर कम गर्दछ। म्याग्नेशियमले विभिन्न स्नायुहरू, मांसपेशिहरूको कोषहरू, र विभिन्न शरीर अंगहरूको कार्य क्षमता वृद्धि गर्दछ।
मस्तिष्कमा अपर्याप्त म्याग्नीशियमले निद्रा विकारहरू, चिन्ता, उदासीनता जस्ता समस्या निम्त्याउँछ, र यसले मेमोरी र संज्ञानात्मक कार्यहरू लाई पनि असर गर्छ। यद्यपि यसको प्रभाव एक व्यक्तिबाट अर्कोमा फरक हुन सक्दछ, तर म्याग्नीशियम एल-थ्रोनेटले तपाईको दिमागमा खनिजको स्तर बढाउँदै त्यसलाई हल गर्न सक्छ।
बिभिन्न चिकित्सा अध्ययन र परीक्षणहरूले मस्तिष्क वृद्धावस्थाको प्रणालीलाई उल्ट्याउन मैग्नीशियम एल-थ्रोनेट शक्तिलाई प्रमाणित गरेका छन्। बाहिर खडा रहेको पत्ता लगाईएको छ कि जब म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेटले नौ बर्ष भन्दा बढी उमेरका उमेरका प्रभावहरूलाई उल्ट्याउन सक्छ भनेर पत्ता लाग्यो। यस औषधिले synapses को घनत्व बढाउँछ, जुन तपाइँको मस्तिष्क कोषहरू बीचको सञ्चार जडान हो - Synaptic घनत्वको नतिजा संज्ञानात्मक गिरावट र मस्तिष्क स्रावको लागि।
अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि १२ हप्ताको म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट प्रशासनले संज्ञानात्मक प्रदर्शनलाई बढावा दिन्छ र दिमागको बुढेसकाललाई उल्ट्याउँछ। सामान्यतया, संख्या र मस्तिष्क कोशिका प्रकार्यहरू र उनीहरूको सेरेब्रल स्विचबोर्डहरूको गिरावटको कारण मस्तिष्क संकुचित हुन्छ जुन synapses भनेर चिनिन्छ।
Synapses को नुकसान संज्ञानात्मक गिरावट पछाडि प्राथमिक कारण हो। त्यसकारण, Synapses density लाई बढावा दिन म्याग्नीशियम L-थ्रोनेट क्षमताले यसलाई बजारमा आज उत्तम स्मृति र संज्ञानात्मक बृद्धि गर्ने पूरक बनाउँछ। एक पटक तपाईको दिमागमा म्याग्नीशियमको स्तर पर्याप्त भयो भने तपाई मस्तिष्क वृद्धावस्थाको समस्यालाई उल्ट्याउन निश्चित हुन सक्नुहुन्छ। औषधि प्रगति निगरानीको लागि खुराक चक्रको अघि, समयमा, र पनी चिकित्सा जाँच आवश्यक हुनेछ।
अरू के म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट को लाभ?
मस्तिष्क स्वास्थ्य र निद्राको गुणस्तर बढाउने मात्र तपाईले म्याग्नेसियम एल-थ्रोनेट लिनको लागि प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईंको शरीरमा लगभग हरेक कोष र अंगहरूको कार्य क्षमता सुधार गर्न औषधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। म्याग्नेशियम एक अनिवार्य खनिज हो जुन तपाइँको शरीरलाई ठीकसँग काम गर्न आवश्यक छ। यहाँ अरू केहि छन् म्याग्नेशियम L- थ्रोनेट लाभ;
(१) डिप्रेशन र चिन्ता कम गर्नुहोस्
यी दुई सर्तहरू आजका धेरै मानिसहरूका लागि धेरै सामान्य छन्, र विभिन्न कारणहरूले तिनीहरूलाई कारण दिन्छ। यद्यपि म्याग्नीशियमले उदासी र चिन्तालाई नियमित गर्ने र सजिलो बनाउने आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरेको छ। प्रायः यी दुई मानसिक अवस्था मैग्नीशियमको कमीको साथ सम्बन्धित छ। तसर्थ, यदि तपाईंसँग तपाईंको दिमागमा यो खनिजको पर्याप्त अभाव छ भने, तपाईं डिप्रेसन र चिन्ताबाट ग्रस्त हुन सक्नुहुन्छ।
स्नायु प्रणाली शान्त गर्न म्याग्नीशियम क्षमता दुई मुड विकार को कम गर्न मा मद्दत गर्दछ। उत्तम परिणामका लागि म्याग्नीशियम एल-थ्रोनेट चिन्ता डाक्टरको निर्देशन अनुसार लिनुपर्दछ।
(२) स्वस्थ हड्डी र मांसपेशिहरु लाई बढावा दिन्छ
म्याग्नीशियमको अभावले खुट्टामा क्रम्प र कमजोर हड्डीहरू निम्त्याउँछ, अधिकतर बुढ्यौलीमा। म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेटले अस्टियोपोरोसिसको उपचार पनि गर्न सक्छ जुन पुरानो वयस्कहरूको लागि सामान्य अवस्था हो। अर्कोतर्फ, खेलाडीहरूले यो औषधि वर्कआउट पछि मांसपेशिको पुन: प्राप्ति र एरोबिक र एनारोबिक उर्जा उत्पादनको लागि उनीहरूलाई मद्दतको लागि लिन्छन्।
म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेटका फाइदाहरू धेरै छन्, र औषधि विभिन्न स्वास्थ्य अवस्थाहरूको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। उदाहरण को लागी, यो हिस्टरेक्टॉमी, शल्यक्रिया, र छाती दुख्ने पछाडि पीडा कम गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेटले सुन्ने क्षमता, मधुमेह, फाइब्रोमाइल्जिया, र कोलेस्ट्रॉलको स्तर कम गर्ने अन्य स्वास्थ्य स्थितिहरूको उपचारमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
कति म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट के मैले लिनु पर्छ?
म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट मुखबाट लिइएको मौखिक औषधि हो। औषधि ट्याब्लेट र पाउडरको रूपमा उपलब्ध छ। यद्यपि म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट खुराक प्रयोगकर्ता र उपचार अन्तर्गत सर्तमा निर्भर गर्दछ। तपाईंको डाक्टर तपाईंको लागि सही खुराक सेट गर्न सबै भन्दा राम्रो व्यक्ति हुनेछ। जहाँसम्म त्यहाँ निर्माताहरूको खुराक सुझाव सधैं मेडिकल चेकअपको लागि जान्छ किनकि मानव शरीर प्रणालीहरू फरक छन्।
१ -19 --30० बर्ष उमेरका लागि सिफारिश गरिएको म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट खुराक 400mg (पुरुष) र महिलाहरूको लागि प्रति दिन 310mg हो। Years१ बर्ष र माथिका पुरुषहरूले 31२०mg र महिलाहरू प्रति दिन 420२०mg लिनु पर्छ। १ pregnant देखि १ years वर्ष बीचको गर्भवती महिलाहरूको लागि सिफारिश गरिएको डाईट्री भत्ता (आरडीए) m००mg हो, जबकि १ -320-years० बर्ष उमेर 14 18०mg र -१-400 वर्ष उमेर 19 30०mg हो।
स्तनपान गराउने महिलाहरूले पनि यो औषधि निम्न अनुसार लिन सक्छन्; प्रति दिन १-14-१-18 वर्ष m 360०mg, १ -19 --30० वर्ष पुरानो सिफारिश गरिएको खुराक 310१०mg हो भने -१-31० वर्ष डोज 50२०mg वरिपरि हुन्छ। आठ वर्षभन्दा माथि उमेर भएका जोसुकाहरूको लागि म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट दैनिक माथिल्लो-स्तर खुराक m 320० मिग्रि हो, र यसमा दुबै स्तनपान र गर्भवती महिलाहरू समावेश छन्।
म्याग्नेशियम L-थ्रोनेट विभिन्न स्वास्थ्य अवस्था को उपचार मा प्रयोग गरीन्छ, र खुराक पनि एक प्रयोगकर्ता देखि अर्को फरक हुन्छ। उदाहरणको लागि, अपच (डिस्पेप्सिया) उपचारमा, -400००-१२०० मिग्रि देखि सिफारिश गरिएको खुराक दायरा चार दिनसम्म दिनको लागि विभाजन गर्नुपर्छ।
इष्टतम संज्ञानात्मक लाभहरूको लागि, सिफारिश गरिएको खुराक १०००mg प्रति दिन दुई पटक लिनु पर्छ। निद्रा सम्बन्धी समस्याहरूको लागि म्याग्नेशियम एल-थ्रोनोटेट लिने बेला, दायाँ खुराक पुरुषहरूको लागि प्रति दिन -1000००--400२०mg र महिलाका लागि 420१०-310०mg को बीचमा हुन्छ। सबैमा, म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट (778571-57-6) खुराक एक प्रयोगकर्ताबाट अर्कोमा फरक हुन्छ; त्यसकारण, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ आफ्नो औषधिबाट सहि प्रिस्क्रिप्शन पाउनुहुन्छ।
Wटोपी खाना अधिक छ म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट?
लिने बाहेक म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट तपाईंको मस्तिष्कमा म्याग्नीशियमको स्तर बढाउन, तपाईं यी खनिजहरूमा समृद्ध खाद्यहरूको पनि फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। यी खानाहरूले तपाईंलाई दिमागमा आवश्यक म्याग्नीशियम स्तर प्राप्त गर्न र सबै खनिज लाभहरूको मजा लिन मद्दत गर्दछ। यहाँ केहि शीर्ष खाद्य पदार्थहरू छन् म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेटमा समृद्ध;
गाढा चकलेट- जति यो स्वादिष्ट र स्वस्थ छ, यसले m 64mg मैग्नीशियम बोक्छ जुन RDI को १%% हो। यस बाहेक, डार्क चकलेट पनि तामा, फलाम र मैंगनीजको साथसाथै प्रिबायोटिक फाइबरमा समृद्ध हुन्छ।
avocados- यो स्वादिष्ट र पौष्टिक फलले तपाईंलाई m 58mg मैग्नीशियम प्रदान गर्न सक्छ जुन RDI को १ 15% छ। फल पनि भिटामिन बी, के, र पोटेशियमको एक महान स्रोतमा समृद्ध छ।
नुट्सारे एक उत्तम म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट प्राकृतिक स्रोतहरू मध्ये एक पनि हुन जान्छ। १ औंस सेवा गर्ने काजूसँग m२mg मैग्नीशियम छ जुन RDI को २०% हो।
लेगुमेसचि मटर, दाल, छोला, र सोया सिमी मैग्नीशियम सहित विभिन्न खनिजहरूमा समृद्ध छन्। उदाहरण को लागी, एक कप पकाइएको सिमीमा १२०mg म्याग्नेशियम हुन्छ, र त्यो RDI को %०% हो।
किन्न म्याग्नेसियम L-thonate अनलाइन
म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट पाउडर शारीरिक र अनलाइन स्टोरहरूमा सजिलैसँग मिल्ने औषधि हो। तपाईं आफ्नो कार्यालय वा घरको आरामबाट यो औषधि किन्न सक्नुहुन्छ र डेलिभरीको लागि कुर्नुहोस् जुन सम्भावित छोटो समयमा भरपर्दो आपूर्तिकर्ताले बनाउनुपर्दछ।
क्वालिटी म्याग्नीशियम एल-थ्रोनोटेट र सम्मानित र अनुभवी विक्रेताबाट मद्दत लिन तपाईंको डाक्टरसँग सल्लाह लिनुहोस्। फरक अनलाइन Nootropics डिपो वालमार्ट, अमेजन, र म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट विटामिन शप सहित यो औषधि भण्डारण गर्नुहोस्.
त्यहाँ अन्य अनलाइन विक्रेताहरू छन् तर जहिले पनि अर्डर गर्ने अघि कुनै पनि Nootropic विक्रेताको बारेमा थप जानकारी प्राप्त गर्न तपाईको अनुसन्धान गर्नुहोस्। म्याग्नेशियम एल-थ्रोनोटेट खरीदलाई कम गुणवत्ताको रूपमा लिनु पर्ने सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ, वा नक्कली औषधिले तपाईंलाई केही गम्भीर प्रभावहरूमा पर्न सक्छ।
संसारभरि म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट अनलाइन विक्रेताहरूको बारेमा थप जान्न Nootropics समीक्षा पढ्नुहोस्। हाल मैग्नीशियम एल-थ्रोनेट अमेजन र म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट वालमार्ट सबैभन्दा लोकप्रिय Nootropic स्रोतहरू हुन्। अनलाइन स्टोरहरू उत्तम हुन् किनकी उनीहरूले तपाईंलाई बिभिन्न चीजहरूको किनमेल गर्न अनुमति दिन्छन् Nootropic पूरक तपाईंको फोन, ल्यापटप, वा ट्याब्लेट मार्फत। तपाईंको स्थानमा उत्पाद पठाउनको लागि कति समय लाग्नेछ हेर्नुहोस् र तपाईंको लागि सबै भन्दा राम्रो सम्झौता छनौट गर्नुहोस्।
म्याग्नेशियम संज्ञानात्मक समारोह बढाउन, निद्रा सुधार्न, र मस्तिष्क वृद्धावस्थाका लक्षणहरूलाई कम गर्नका साथै शरीरको कोशिका र अ organs्गहरूको कामका लागि बृद्धि हुने महत्वपूर्ण खनिज हो। त्यहाँ फरक छन् म्याग्नेशियम स्रोतहरू, औषधिबाट प्राकृतिक खाद्यहरूमा। म्याग्नीशियमको अभावले व्यक्तिहरूलाई विभिन्न स्वास्थ्य अवस्थाहरू जस्तै एडीएचडीमा पर्दछ। यद्यपि, म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट एडीएचडीको विकास कम म्याग्नीशियम स्तर भएका व्यक्तिको लागि राम्रो खबर हो किनभने यो खनिजको कमीका लक्षणहरूका लागि एक शक्तिशाली औषधि साबित भएको छ। यो औषधि अन्य चिकित्सा प्रयोगको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ जस्तै सर्जरी पछि पीडा कम गर्ने र हड्डी र मांसपेशीहरूको स्वास्थ्य बढावा।
विभिन्न म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट समीक्षालाई हेर्दै, तपाईं आधिकारिक रूपमा भन्न सक्नुहुनेछ कि यो सब भन्दा ठुलो मैग्नीशियम स्रोत हो। म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट एक कानूनी औषधि हो, तर तपाईंले यसलाई राम्रो परिणामहरूको लागि डाक्टरको पर्खाइमा लिनु पर्छ। औषधि दुबै शारीरिक र अनलाइन स्टोरहरूमा उपलब्ध छ। तपाईंको डाक्टरलाई सूचित नगरी कहिले पनि खुराक माथि वा तलतिर समायोजित नगर्नुहोस्। कुनै साइड इफेक्ट को मामला मा पनि तुरुन्तै आफ्नो मेडिसिस सम्पर्क गर्नुहोस्। म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट र अन्यको बारेमा अधिक जानकारीको लागि nootropics किन्न, चिकित्सा पेशेवरहरु संग परामर्श।
सूर्य, Q., Weinger, JG, माओ, एफ, र लियू, G. (२०१ 2016)। संरचनात्मक र कार्यात्मक synapse घनत्वको नियमन L-Thonate द्वारा इन्ट्रानुरोनल म्याग्नेशियम एकाग्रता को मॉडुलनको माध्यम द्वारा। Neuropharmacology, 108, 426-439।
मजरेकु, IN, Ahmetaj, H., Aliko, V., Bislimi, K., हल्ली, एफ।, र हल्ली, J. (२०१ 2017)। Catalase (CAT), ALT र AST को गतिविधि स्विस एल्बिनो चूहों को बिभिन्न अंगहरुमा लेड एसीटेट, भिटामिन सी र म्याग्नेशियम- L- थ्रोनोटे को उपचार गरीएको। क्लिनिकल र डायग्नोस्टिक अनुसन्धानको जर्नल, 11(11)।
मक्ले, GA, Hoxha, N., लुचिंगर, JL, रोजर्स, MM, र Wiles, NR (२०१))। क्रोनिक डाईट म्याग्नेशियम-एल-थ्रोनेट गति विलुप्त हुन्छ र एक कन्डिशन्ड स्वाद बिरुद्दको सहज पुनर्प्राप्ति कम गर्दछ। औषध विज्ञान जैव रसायन र व्यवहार, 106, 16-26।
अबुमरिया, N., Luo, L., आह, एम, र लियू, जी। (२०१ 2013) म्याग्नीशियम पूरक स्थानिक प्रासंगिक ढाँचा पृथक्करण वृद्धि र डर overgeneralization रोक्छ। व्यवहार फार्माकोलजी, 24(4), 255-263।
१.मेग्नीशियम एल-थ्रोनोनेट भनेको के हो?
२. मैग्नीशियम एल-थ्रोनेट कसरी काम गर्छ?
I.Is म्याग्नेशियम L-Thononate निद्रा को लागी राम्रो छ?
B. ब्रेन म्याग्नेशियम L-Threonate को पुनर्स्थापना प्रभाव
Mag.मेग्नीशियम एल-थ्रोनेटका अन्य फाइदाहरू के हुन्?
Much. मैले कति म्याग्नीशियम एल-थ्रोनेट लिन पर्छ?
Mag. कुन मेग्नीशियम एल-थ्रोनेटमा उच्च भोजन हुन्छ?
B.बुय म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट अनलाइन